Muxuu yahay ilaahey , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Marka loo eego maraggii Qorniinka, Ilaah waa ilaah rabaani ah saddex daa'im ah, isku mid ah laakiin shaqsiyado kala duwan - Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Isagu waa Ilaaha keliya ee runta ah, weligiis waara, oo aan la beddeli karin, wax walba awood u lahayn, wax walba yaqaan, oo meel walba jooga. Isaga waa Abuuraha cirka iyo dhulka, dayactirka caalamka iyo isha badbaadada dadka. In kasta oo transcired, Ilaah wuxuu si toos ah iyo shaqsi ahaaneed ku sameeyaa dadka. Ilaah waa jacayl iyo wanaag aan dhammaanayn (Markos 12,29:1; 1,17 Timoteyos 4,6:28,19; Efesos 1: 4,8; Matayos 5,20:2,11; 16,27 Yooxanaa 2: 13,13; 1:8,4; Tiit 6; Yooxanaa; Korintos) ; Korintos).
«Ilaaha ah Aabbaha, waa qofka ugu horeeya Eebbe, waana qofka asal ahaan asalkiisu yahay, kaas oo Wiilku ka dhashey da 'hore iyo kan Ruuxa Quduuska ahu weligiis ku sii socdo Wiilka. Aabuhu, oo abuuray wax walba oo la arki karo oo aan la arki karin tan iyo Wiilka, ayaa u diraya Wiilka si aan u gaarno badbaadada oo u siiso Ruuxa Quduuska ah cusboonaysiinta iyo aqbalida innagoo ah carruurta Ilaah » (Yooxanaa 1,1.14, 18; Rooma 15,6; Kolosay 1,15-16; Yooxanaa 3,16; 14,26; 15,26; Rooma 8,14-17; Fal 17,28).
Miyaad abuuray Eebbe mise Eebbe isagaa ina abuuray?
Ilaahay diin ma aha, naxariis, "midkeen, Mareykan ah, raasumaal" waa cinwaanka buug dhowaan la daabacay. Waxay ka hadlaysaa fikradaha qaldan ee Ilaahay ka qabo.
Waa layli xiiso leh in la baaro sida dhismaheenna [fikirka dhismaha] uu Ilaah u qaabeeyey qoyskeenna iyo asxaabteena; xagga suugaanta iyo farshaxanka; iyada oo loo sii marayo telefishanka iyo warbaahinta; iyada oo loo marayo heeso iyo sheeko suugaan; iyada oo loo marayo rabitaankeena iyo baahiyahayaga; iyo dabcan iyada oo loo marayo khibradaha diinta iyo falsafadda caanka ah. Xaqiiqadu waxay tahay in Ilaah uusan ahayn dhisme ama fikrad. Eebbe fikir ma aha, ee ma aha fikrad aan caqli gal ahayn oo maskaxdeena caqliga lihi ku jirto.
Marka loo eego aragtida Baybalka, wax walba way yimaaddaan, xitaa fikirradeenna iyo awooddeenna aan ku horumarinno fikradaha ah Ilaaha aan abuurin ama dabeecaddiisa iyo tayadiisa aan annagu qaabayn (Kolosay 1,16: 17-1,3; Cibraaniyada); ilaah fudud. Eebbe ma leh bilow ama dhammaad.
Bilowgii ma jirin fikirka dadku ee Eebbe, ee waxay ahayd bilowgii (tixraac ku meel gaadh ah oo Ilaah u adeegsanayo fahamkeena xaddidan) Ilaah (Bilowgii 1; Yooxanaa 1,1). Annagu maanaan abuurin Eebbe, laakiin Eebbe wuxuu inaga abuuray araggiisa (Bilowgii 1:1,27). Ilaah waa sidaas, sidaa darteed annaguna waan nahay. Ilaaha daa'imka ah ayaa abuuray wax walba (Falimaha Rasuullada 17,24: 25-40,28); Ishacyaah, iwm. Oo isaga oo keliya ayaa wax walba lagu jiraa.
Buugag badan ayaa ka sheekeeya waxa Ilaah yahay. Shaki iigama jiro inaan la nimaadno liistada ujeeddooyinka iyo magacyada sharaxaya aragtideena ah cidda Ilaah yahay iyo wuxuu isagu sameeyo. Si kastaba ha noqotee, ujeedka daraasadani waa in la xuso sida Eebbe loogu sharaxay Qorniinka oo looga wada hadlo sababta sharraxaadahaani ay muhiim ugu yihiin rumaystaha.
Baybalku wuxuu ku siraa Abuuraha inuu yahay mid weligiis jira, oo aan la arki karin, xoogna lahaynsskama dambaysta ah oo awood badan
Eebbe abuurkiisuu hor yaallaa (Sabuurradii 90,2) oo isagu "weligiis wuu noolaa" (Ishacyaah 57,15). «Qofna weligiis ma arkin Ilaah» (Yooxanaa 1,18), mana ahan jidh ahaan, laakiin "Ilaah waa Ruux" (Yooxanaa 4,24). Kuma koobna waqtiga iyo goobta, waxbana kama qarsoona (Sabuurradii 139,1: 12-1; 8,27 Boqoradii 23,24, Yeremyaah). Isagu "wax walba wuu ogyahay" (1 Yooxanaa 3,20).
Bilowgii 1: 17,1 Ilaah wuxuu ku dhawaaqay Ibraahim: "Waxaan ahay Ilaaha Qaadirka ah", iyo Muujintii 4,8 afarta xayawaan waxay ku dhawaaqayaan: "Quduus, qoduus, qoduus, Ilaah waa Rabbiga Qaadirka ah oo halkaas joogay iyo yaa jira iyo yaa imanaya ». «Codka Rabbiga waa xoog badan yahay, Rabbiga codkiisu waa haybad badan yahay» (Sabuurradii 29,4).
Bawlos wuxuu faray Timoteyos: "Laakiin, Ilaaha daa'imka ah, oo aan dhiman karin oo aan la arki karin, oo ah Ilaaha keligiis ah, maamuus iyo ammaanu ha u ahaato weligiis! Aamiin ” (1 Timoteyos 1,17). Sharaxaado la mid ah oo ilaahnimada waxaa laga heli karaa suugaanta jaahilka iyo dhaqammada badan ee diinta aan Masiixiyiinta ahayn.
Bawlos wuxuu soo jeedinayaa in xukunka Ilaah uu qof walba u muuqan karo marka qofku eego mucjisooyinka abuuritaanka. "Sababtoo ah," ayuu qoray, "Isaga oo aan la arki karin, oo xooggiisa daa'imka ah iyo ilaahnimadiisa laga dhex arki jiray shuqulladiisa tan iyo abuurniinta dunida" (Rooma 1,20).
Aragtida Bawlos waa mid si cad u muuqata: dadku "waxay ku dhex dheceen fikirradooda (Rooma 1,21:17,22) waxayna abuureen diintooda iyo sanamyadooda. Wuxuu sidoo kale ku tilmaamay Falimaha Rasuullada 31 in dadku si dhab ah loogu jahwareeri karo dabeecadda rabbaaniga ah.
Ma kala duwanaansho tayo leh oo u dhaxaysa Ilaaha Masiixiyiinta ah iyo ilaahyada kale?
Marka laga eego aragtida Baybalka, sanamyada, ilaahyadii hore ee Griiga, Roomaanka, Mesopotamian iyo khuraafaadka kale, waxyaabaha lagu caabudo xilligan xaadirka ah iyo kuwii la soo dhaafay, sinaba uma eka ilaahnimo maxaa yeelay, "Rabbiga, Ilaaheenna, Sayidku waa keligiis" (Deut 5). Ilaah kale ma jiro ilaah runta ah mooyee (Baxniintii 2:15,11; 1 Boqoradii 8,23:86,8; Sabuurradii 95,3;).
Ishacyaah wuxuu ku dhawaaqay in ilaahyada kale aysan "waxba ahayn" (Ishacyaah 41,24), iyo Bawlos wuxuu xaqiijinayaa in "waxa loogu yeedhay ilaahyada" inaysan lahayn wax ilaah ah sababta oo ah "Ilaah kale ma jiro mid mooyee," Ilaah ah Aabbaha wax walboo ay yihiin ". (1 Korintos 8,4: 6). «Miyaynan kulligeen aabbe ahayn? Sow ilaah kale nama uusan noo abuurin? » nebigu Malaki wuxuu u weeydiiyay hadal Sidoo kale eeg Efesos 4,6.
Waxaa muhiim u ah qofka rumeeysan inuu qadariyo weynaanta Ilaah iyo inuu ka baqo hal ilaaha. Si kastaba ha noqotee, tani kuma filna lafteeda. "Bal eeg, Ilaah waa weyn yahay oo waxna ma fahmi karaan, Oo ninna ma baadhi karo tirada cimrigiisa," (Job 36,26). Farqi aad u weyn oo u dhexeeya cibaadada Ilaaha Kitaabka Qudduuska ah iyo caabudida waxa loogu yeero ilaahyada ayaa ah in Ilaaha Kitaabka Qudduuska ahu uu doonayo in aannu si fiican isaga u aqoonsanno, isaga oo sidoo kale doonaya in uu na ogaado isaga shaqsi ahaan iyo shaqsi ahaanba. Ilaaha Aabbaha ahi ma doonayo inuu inala soo xidhiidho meel fog. Isagu waa "noo dhow" mana aha "ilaah ka fog" (Yeremyaah 23,23).
Sidaa darteed, Ilaaha innaga lagu sameeyay abuurkiisu waa mid. Mid ka mid ah waxyaabaha lagu muujiyo abuuridda aragtida Ilaah waa in aan noqon karno isaga oo kale. Laakiin Ilaah muxuu yahay? Qorniinku wuxuu muujiyaa wax badan oo bannaan oo loogu talagalay muujinta cidda Ilaah yahay iyo wuxuu yahay. Aynu tixgelinno qaar ka mid ah fikradaha kitaabiga ah ee ku saabsan Ilaah, oo waxaan arki doonnaa sida fahamka Ilaah yahay waxa kiciya tayada ruuxiga ah ee uu rumaystuhu ku horumarin karo cilaaqaadka ay la leedahay dadka kale.
Muhiimad ahaan, Qorniinku ma farayo rumaystayaasha inay ka turjumaan muuqaalka Ilaah marka loo eego weynaanta, awoodda, awoodda wax walba, iwm. Ilaah waa qoduus (Muujintii 6,10:1; 2,2 Samuu'eel 78,4; Sabuurradii 99,9; 111,9;). Ilaah waa ku ammaan yahay quduusnaantiisa, (Bilowgii 2:15,11). Dad badan oo fiqiga yaqaanna waxay qeexeen Quduusnimada inay tahay xaalad lagu go'doomi karo ama loo qaddarin lahaa ujeedo rabbaaniya. Quduusnimadu waa ururinta tayada oo dhan oo qeexaya qofka Ilaah yahay oo isaga ka soocaya ilaahyada beenta ah.
Cibraaniyada 2,14 waxay noo sheegaysaa in quduus la'aan la'aantii "qofna arki doonin Rabbiga"; «... laakiin sida kan idiinku yeedhay uu qoduus yahay, sidaas oo kale waa inaad qudduus ahaanta u ahaantaan markii aad beddelataan» (1 Butros 1,15-16; Laawiyiintii 3). Waa inaan wadaagno "Quduusnimadiisa" (Cibraaniyada 12,10). Ilaah waa jacayl naxariis badanna (1 Yooxanaa 4,8; Sabuurradii 112,4; 145,8). Qoraalka kor ku xusan ee warqaddii ugu horreysay ee John wuxuu sheegayaa in kuwa Ilaah yaqaanna lagu garan karo carooda dadka kale maxaa yeelay Ilaah waa jacayl. Jacaylku wuxuu dhex galay ilaahnimada "aasaaska dunidan" (Yooxanaa 17,24) maxaa yeelay jacaylku waa dabeecadda guud ee Eebbe.
Sababtoo ah wuxuu u muujiyaa naxariis, waa inaan sidoo kale u isu naxariisannaa (1 Butros 3,8: 7,9, Sekaryaah). Eebana waa dambi dhaafe Naxariista, Eebana waa dambi dhaafe Naxariista (1 Butros 2,3: 2; Baxniintii 34,6; Sabuurradii 86,15; 111,4; 116,5).
Muujinta jacaylka Eebbe waa «wanaaggiisa weyn» (Cl 3,2). Ilaah waa diyaar «is cafiya, waa naxariis badane, naxariis badan, samir badan oo naxariis badan» (Nexemyaah 9,17). Laakiin Ilaahayow, Ilaahayagow, naxariis iyo dembi dhaaf baa leh. Sababtoo ah waxaan noqonay riddoobay » (Daanyeel 9,9).
"Ilaaha nimcada leh" (1 Butros 5,10) wuxuu rajeynayaa in nimcadiisa la faafiyo (2 Korintos 4,15), iyo in Masiixiyiintu ka turjumaan nimcadiisa iyo dambi dhaafkiisa markay la macaamilaan kuwa kale (Efesos 4,32). Ilaah waa wanaagsan yahay (Luukos 18,19; 1Chr 16,34; Sabuurradii 25,8; 34,8; 86,5; 145,9).
«Dhammaan wax kasta oo wanaagsan iyo dhammaan hadiyado kaamil ah waxay ka yimaadeen xagga sare, xagga aabbaha nuurka ah» (Yacquub 1,17).
Helitaanka wanaagga Ilaah waa u diyaargarowga toobadda - "mise ma quudhsanaysaa hodantinimada wanaagiisa ... miyaadan ogayn in wanaagga Eebbe kuu horseedo toobadda" (Rooma 2,4)?
Ilaaha awooda inuu "ku faani karo wax kasta oo aan weydiisanno ama fahanno" (Efesos 3,20) wuxuu rumaystaha u sheegayaa inuu "dadka oo dhan wanaag ugu wada sameeyo" maxaa yeelay ku alla kii wax wanaagsan sameeya wuxuu ka yimid xagga Ilaah (3 Yooxanaa 11).
Ilaah baa inala jira (Rooma 8,31)
Dabcan, Ilaah aad ayuu uga badan yahay luuqadda muuqaalka jirku tilmaami karo. «Cabbirkiisu waa mid aan la baadhi karin» (Sabuurradii 145,3). Sideen ku ogaan karnaa oo aan u muujin karnaa sawirkiisa? Sidee baan u fulin karnaa rabitaankiisa inuu noqdo mid quduus ah, jacayl leh, naxariis badan, naxariis leh, naxariis badan, dambi dhaaf iyo wanaag?
Ilaahow, «oo ma jiro is beddel, Oo beddelma iftiinka iyo gudcurka» (Yacquub 1,17) iyo dabeecadeeda iyo ujeedadeeda nimcadda ka buuxo isma beddelaan (Waqtiga 3,6) jid baa noo furay. Isaga ayaa inala jooga oo wuxuu doonayaa inuu carruurtiisa noqdaan (1 Yooxanaa 3,1).
Cibraaniyada 1,3 wuxuu inoo sheegayaa in Ciise, Wiilka Ilaah, ee weligiis abuuray, uu yahay muujinta saxda ah ee jiritaanka Ilaah - "aragtida qofkiisa" (Cibraaniyada 1,3). Haddii aan u baahan nahay sawir la taaban karo oo ku saabsan aabaha - Ciise waa. Isagu waa “aragtida Ilaaha aan la arki karin” (Kolosay 1,15).
Masiixu wuxuu yidhi: «waxkastoo aabbahay baa i siiyay; oo ninna wiilka yaqaan ma jiro aabo keliya; mana jiro qof garanaya aabaha inuu yahay kaliya wiilka iyo cidda uu wiilku doonayo inuu u muujiyo » (Matayos 11,27).
Qaabka lagu garto in Ilaah lagu garto wiilkiisa ayaa ah. Qorniinku wuxuu muujiyaa sida Ilaah yahay, oo tanna waa u muhiim qofka rumaystaha ah maxaa yeelay waxaa laygu abuuray suuradda Ilaah.